Umaka: buyela ekutshalweni kwezimali | Martech Zone
Umaka: buyela ekutshalweni kwezimali
Ungakulandela Kanjani Ngokuphumelelayo Ukuguqulwa Kwakho Nokuthengisa Kwakho Ekukhangisweni Kwe-imeyili
ULwesithathu, April 28, 2021 ULwesithathu, April 28, 2021 UDmytro Spilka
Ukumaketha nge-imeyili kubaluleke kakhulu ekuguquleni ukuguqulwa njengoba kwenzeka. Kodwa-ke, abathengisi abaningi basahluleka ukulandelela ukusebenza kwabo ngendlela enenjongo. Isimo sokumaketha sivele ngesilinganiso esisheshayo ngekhulu lama-21, kepha kukho konke ukukhuphuka kwezokuxhumana, i-SEO, nokumaketha kokuqukethwe, imikhankaso ye-imeyili ibilokhu ihlale iphezulu kokudla. Eqinisweni, ama-73% wabakhangisi basabheka ukumakethwa kwe-imeyili njengezindlela eziphumelela kakhulu
Izibalo Zokukhangisa ze-Influencer
NgoMgqibelo, Novemba 16, 2019 NgoMgqibelo, Novemba 16, 2019 Douglas Karr
Sabelane nge-infographics ukuthi kuyini ukumaketha okunethonya, ukuvela kokumaketha okunethonya phambilini, kanye nezindatshana impela ezimayelana nezindlela ezinhle zokumaketha ezinomthelela, ukuthi ungabasebenzisi kanjani abanethonya, nomehluko phakathi kwethonya elincane nelodumo. Le infographic ichaza ukubuka konke kokukhangisa okunomthelela kanye namasu wamanje nezibalo kuwo wonke ama-mediums neziteshi. Abantu baseSmallBizGenius bahlanganise i-infographic ephelele enikezela ngesimo esicacile sokumaketha okunomthelela namuhla, Ngaphansi
Amathrendi we-Marketing Automation, Izinselelo, nempumelelo
NgoLwesine, ngo-Okthoba 3, 2013 NgoLwesine, ngo-Okthoba 3, 2013 Douglas Karr
UHolger Schulze nebhulogi le-Everything Technology Marketing benze ucwaningo kubakhangisi be-B2B kwi-B2B Technology Marketing Community ku-LinkedIn. Ngibuze uTroy Burk, isikhulu esiphezulu se-Right On Interactive - ipulatifomu yokumaketha ekhonjwe njengomholi embonini - ukuthi inikeze impendulo ngemiphumela yocwaningo. Ucwaningo lwenziwe kahle futhi luhlinzeka ngamamethrikhi amahle wokuthi i-subset yabathengisi be-B2B ikusebenzisa kanjani ukuzenzakalela kokumaketha. Kudos
Okulindelwe Ekutshalweni Kwezimakethe Zakho
NgoLwesine, Juni 20, 2013 NgoLwesine, Juni 20, 2013 Douglas Karr
Sibe nemihlangano emibili emnandi izolo, omunye ube nekhasimende futhi omunye waba namathemba. Zombili izingxoxo bezingaphansi kokulindelwe ekubuyiselweni kotshalo-mali lokumaketha. Inkampani yokuqala ngokuyinhloko yayiyinhlangano yokuthengisa ephumayo kanti eyesibili kwakuyinhlangano enkulu ethembele kakhulu ekumaketheni kwe-database nasekuphenduleni ngeposi okuqondile. Zombili lezi zinhlangano zaqonda, kwehla nedola, ukuthi isabelomali sabo sokuthengisa nesabelomali sokumaketha kubasebenzela kanjani. Inhlangano yokuthengisa yakuqonda lokho, nge
I-Firemail: Ukumaketha nge-imeyili ngaphandle koMhlinzeki Wensizakalo ye-imeyili
NgeSonto, uDisemba 13, i-2009 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ngingumlandeli omkhulu wabanikezeli bezinsizakalo ze-imeyili kanye nemikhiqizo nezinsizakalo ezinhle abazinikezayo. Mhlawumbe okubaluleke kakhulu izingqinamba zokulethwa ezingavela lapho kuthunyelwa inani le-imeyili. Ngokukhwabanisa okukhulu phakathi kwe-Internet Service Provider (ISPs) ne-Email Service Provider (ESPs), kwesinye isikhathi ibhizinisi lifakwa phakathi. Kuyindida ukuthi ukusebenza ne-ESP futhi ungenalo igunya kungadala izingqinamba zokulethwa, futhi. Ama-ISP amaningi avimba i-imeyili ngenxa nje yokuthi